एकै दिन एक लाख कोरोना संक्रमित बढेपछि सँसारभर महामारीको झन् खतरा ! «
एकै दिन एक लाख कोरोना संक्रमित बढेपछि सँसारभर महामारीको झन् खतरा !
Published : 18 May, 2020 8:04 am
आइतबार एकै दिन एक लाखभन्दा बढी कोरोना भाइरसका संक्रमित रेकर्ड भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले दैनिक बुलेटिनमा आइतबार विश्वभर उक्त संख्यामा मानिसहरु संक्रमित भएको जनाएको हो । एकै दिन एक लाख संक्रमित बढ्दा विश्वभर कोभिड १९ भएकाहरु ४५ लाख कटेका छन् । यही रफ्तारमा वद्धि भए यसै हप्ता सँसारका आधा करोड जनसंख्या संक्रमित हुने देखिएको छ । आइतबार एकै दिन ५ हजारभन्दा बढी मानिसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । यो निकै खतरनाक अवस्था हो ।